Author: admin Published Date: mars 26, 2020 Leave a Comment on TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUITEMENT
Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Ary hoy kosa izy: Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny? Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Nampoizin’iza akory moa no hilaza amin’i Abrahama fa hampinono zaza Saraha? Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko.
Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Modia any amin’ny tanin’ny razanao sy any amin’ny havanao; ary homba anao Aho. Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao? Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho.
Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho.
Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny mwlagasy izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo.
Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra.
Ary moa misy malafasy malagssy va ao an-tranon’ny rainao? Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano.
Angamba tsy hety baiblly amiko ho amin’ity bxiboly ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho? Dia nanorina alitara teo izy ho psf Jehovah Izay niseho taminy. Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana? Ny lehilahy izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa izy: Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.
Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny sy Jeteta loham-pireneny 41 sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 sy Kenaza malagassy sy Temana loham-pireneny sy Mibzara loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny.
Efa nomen’i Jehovah mwlagasy malalaka isika ankehitriny, makagasy hihamaro eo amin’ny tany. Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao?
Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy.
Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Dia nahatsiaro Farao, koa indro fa nofy ihany izany. Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako?
Aoka pdv mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Ary nifoha maraina izy ka nanao hoe: Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao.
Ahoana izao nataonao baiboky izao? Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny prf Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka malagasg hilazako hoe: Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy? Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Ary nahoana ;df manjombona ny tarehinao?
Fa hoy Ilay niteny: Dia nomen’i Abrama azy ,alagasy ampahafolon’ny zavatra rehetra.